Isticmaalka aad VLC xitaa karaa download video s internet ka. Waxaan idin ​​tusin doonaa sida taas loo sameeyo in qaybta soo socota 12 talaabooyin aad u fudud. Waxaa laga yaabaa inaad iyaga raac oo aad noqon doontaan inaad kala soo baxdo oo wuxuu ku raaxaysan tan oo videos hadda ka awoodaan.
Wixii Windows iyo Mac
Tag mid ka mid ah daalacashada internetka aad leedahay oo fur website-ka ay ku jiraan video aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo. Tusaale ahaan, ha na ay sheegayaan in aad doonaysid in aad kala soo bixi video ah goobta loo jecel yahay YouTube.
Ka dib markii aad leedahay raadiyo video ee YouTube , si fudud nuqul Jidka video in ka siiyaa biraawsarkaaga cinwaanka bar.
Hadda, VLC Media bilaabi Player on your computer oo riix furayaasha Ctrl + N. Waa in la furto daaqad cusub oo aad loo yaqaan Open Media. Dhaji Jidka video in aad soo guuriyeen ee qaybta ka leeyahay, 'Fadlan qor URL shabakad:' dooro Play.
Isla markii aad riixi badhanka Play ah, ciyaaryahanka VLC waa in toos ah u bilaabi hoorto & ciyaaro clip video in aad dooratay ee.
Hadda, u tag Tools> codec Information taas waa in la furo suuqa kala hadda Media Information. Waxaad arki doontaa wax xiriir hore ee qaybta 'Location:' kaas oo ah xiriiriyaha download dhabta ah ee file video ah.
Ka eeg xiriirka iyo xaq samayn click meel kasta oo markaas dooran 'Dooro All' ka fursadaha.
Mar kale Ma click ah xaq on link & dooro 'Copy' ka fursadaha.
Tag web browser hadda iyo paste link ka soo guuriyeen in bar cinwaanka. Marka sameeyo, jaraa'id gala. Video waa inay haatan u ciyaaro ee loo siiyaa biraawsarkaaga.
Tani waa tallaabadii u dambaysay; si loo badbaadiyo video hadda, si fudud xaq u guji meel kasta oo uu furmo suuqa browser aad la video furan oo la ciyaaray ee asalka ah, ka dibna la doorto ikhtiyaarka 'Save Video Sida' iyo saxaafadda gala '.
Waxaa laydin sii daayo; aad si guul leh u soo bixi ee video oo aad doorato oo isticmaalaya Media VLC ka Player. Hadda, waxaad ku celin karaa habka isku mid ah videos kala duwan oo aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ku talinaynaa kale oo aad u fiican in habka kor ku xusan tan iyo inaanay kulligood inaga mid noqon lahaa ok in la raaco tirada badan oo ka mid ah tallaabooyinka ay soo degsado isticmaalaya VLC Media Player u baahan yahay. Tani waa software weyn ee ay bixiyaan magaca lagu kalsoonaan karo Wondershare, iyo waxa loo yaqaan Video Converter Ultimate.
Best VLC Kaaliyaha , All-In-One Video Xalka!
Play waxa VLC ciyaari cann't, hal ciyaaryahan u ciyaaro oo dhan!
Sida loo ciyaaro content DLNA isticmaalaya VLC
> Resource > VLC > VLC Downloader - Sida loo soo bixi videos isticmaalaya VLC Media Player